डलरको भाउ आज बढ्यो, कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । विश्वभर कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेकै बेला अमेरिकी डलरको भाउ भने बलियो बन्दै गएको छ। नेपाली मुद्राको तुलनामा पनि डलरको भाउ बलियो बन्दै गएको छ। आजमात्र डलरको भाउ ५६ पैसाले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि मंगलबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२१.१६ रुपैयाँ र...
लकडाउनका कारण नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स ५०% ले घट्यो
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनका कारण नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा ५० प्रतिशतले कमी आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैतमा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको छ। जब लकडाउनअघिको सामान्य अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीले मासिक ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रेमिटेन्स पठाउँदै आएको देखिएको...
फेरि उकालोतिर डलरको भाउ, आज एकैदिन झन्डै रु.१ को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । गत साता लगातार ओरालो लागेको अमेरिकी डलरको भाउ तीन दिन स्थिर रहँदै आज मंगलबार बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि मंगलबार कायम गरेको विनियम दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२०.८४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२१.४४ रुपैयाँ पुगेको छ। डलरको भाउ गत शुक्रबारको तुलनामा ९६ पैसाले बढेको हो। गत शुक्रबार प्रतिडलर खरिददर ११९.८८...
डलरको भाउमा ओरालो यात्रा जारी, आज पनि ह्वात्तै घट्यो
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ आज शुक्रबार पनि ह्वात्तै घटेको छ। डलरको भाउ हिजो बिहीबारको तुलनामा ९३ पैसाले घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि शुक्रबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर ११९.८८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०.४८ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो बिहीबार प्रतिडलर खरिददर १२०.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२१.४१ रुपैयाँ...
लगातार तीन दिनदेखि डलरको भाउमा गिरावट, कतिमा झर्यो दर ?
काठमाण्डौ । यो साता अमेरिकी डलरको भाउमा लगातार गिरावट आइरहेको छ। पछिल्लोपटक गत शनिबार बढेको डलरको भाउ दुई दिन स्थिर रहँदै लगातार तीन दिनदेखि घटिरहेको छ। आज बिहीबार पनि डलरको भाउ घटेको छ। योसँगै डलरको भाउ तीनमा १.२२ पैसाले घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बिहीबार कायम गरेको विनियम दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२०.८१...
दुई दिन स्थिर रहेको डलरको भाउ घट्न थाल्यो
काठमाण्डौ। लगातार दुई दिन स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउमा गिरावट आउन थालेको छ। गत शनिबार उकालो लागेर दुई दिन स्थिर बनेको डलरको भाउमा मंगलबार र बुधबार गिरावट आएको हो। डलरको भाउमा बुधबार ८ पैसा र मंगलबार ३४ पैसाको गिरावट आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बुधबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२१.६१...
डलरको भाउ फेरि उकालो लाग्यो, कति बढ्यो?
काठमाण्डौ । निकै उतारचढावका बीच अमेरिकी डलरको भाउ आज शनिबार फेरि उकालो लागेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि शनिबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२२.०३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२२.६३ रुपैयाँ कायम भएको छ। जुन हिजो शुक्रबारको तुलनामा ६१ पैसाले बढी हो। हिजो शुक्रबार प्रतिडलर खरिददर १२१.४२ रुपैयाँ र बिक्रीदर...
ओरालो लाग्दै डलरको भाउ, आज झन्डै रु. १ ले घट्यो
काठमाण्डौ। लगातार बढिरहेको अमेरिकी डलरकाको भाउ ओरालो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ। डलरका भाउ आज शुक्रबार ९६ पैसाले घटेको हो। हिजो पनि डलरको भाउ २६ पैसाले घटेको थियो। यो दुई दिन गरी डलरको भाउ १.२२ रुपैयाँले घटिसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि शुक्रबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२१.४२ रुपैयाँ र...
लगातार बढिरहेको डलरको भाउ आज १ सुकाले घट्यो
काठमाण्डौ । लगातार बढिरहेको अमेरिकी डलरको भाउ आज बिहीबार घटेको छ। डलरको भाउ हिजो बुधबारको विनिमय दरको तुलनामा बिहीबार २६ पैसाले घटेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बिहीबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२२.३८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२२.९८ कायम भएको छ। हिजो बुधबार प्रतिडलर खरिददर १२२.६४ रुपैयाँ र बिक्रीदर...
कोरोना संकटमा डलरसामु कमजोर बन्दै नेपाली मुद्रा, आज पनि ह्वात्तै बढ्यो विनिमय दर
काठमाण्डौ । विश्व महामारी कोरोनाभाइरसले एकातिर विश्व अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको बेला अमेरिकी मुद्रा बलियो बन्दै गएको छ। जसका कारण अमेरिकी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बनिरहेको छ। डलरको भाउ नेपाली मुद्राको तुलनामा लगातार बढिरहेको छ। आज बुधबार पनि डलरको भाउ हिजोको तुलनामा ४८ पैसाले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी...
दुई दिन स्थिर रहेको डलरको भाउ फेरि बढ्यो, आजको विनियम दर कति ?
काठमाण्डौ । लगातार दुई दिन स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको भाउ आज मंगलबार २३ पैसाले बढेको छ। विश्व महामारी कोरोनाभाइरसले एकातिर विश्व अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको बेला अमेरिकी मुद्रा बलियो बन्दै गएको छ। जसका कारण अमेरिकी मुद्राको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बनिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि मंगलबार कायम गरेको...
काठमाण्डौ। लगातार उच्च विनिमय दरको रेकर्ड बनाइरहेको अमेरिकी डलरको भाउ शनिबार भने ह्वात्तै घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि शनिबार कायम गरेको विनियम दरअनुसार डलरको भाउ प्रतिडलर खरिददर १२१.९३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२२.५३ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो शुक्रबार प्रतिडलर खरिददर १२२.६८ र बिक्रीदर १२३.२८ रुपैयाँ कायम भएको...
डलरको भाउमा उछाल, आज फेरि नयाँ उचाइमा
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको भाउ आज शुक्रबार फेरि नेपालकै इतिहासमा नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। एकातिर कोरोनाले विश्वअर्थतन्त्र संकटमा परेको छ भने अर्को डलरको भाउ भने दिनदिनै नयाँ उचाइमा पुगिरहेको छ। डलर बलियो बन्दै जाँदा नेपाली रुपैयाँ झनै कमजोर बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि शुक्रबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार...
डलरको भाउमा फेरि रेकर्ड ब्रेक, विनिमय दर अहिलेसम्मकै उच्च
काठमाण्डौ । सामान्य उतारचढावका बीच अमेरिकी डलरले आज बिहीबार नेपालकै इतिहासमा उच्च विनिमय दर कायम गर्न सफल भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बिहीबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२२.०१ रुपैयाँ बिक्रीदर १२२.६१ रुपैयाँ कायम भएको छ। यो हालसम्मकै डलरको उच्च विनिमय दर हो। यसअघि गत अप्रिल ९ तारिखमा डलरको...
नेपालकै इतिहासमा आज सर्वाधिक उचाइमा डलरको भाउ
काठमाण्डौ । अमेरिकी डलरको विनियम दर बिहीबार नेपालकै इतिहासको उच्च विन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राहरुका लागि बिहीबार कायम गरेको विनिमय दरअनुसार प्रतिडलर खरिददर १२१.९० र बिक्रीदर १२२.५० रुपैयाँ कायम भएको छ। यो विनिमय दर हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि गत मार्च २४ तारिखमा डलरको भाउ नेपालकै इतिहासमा हालसम्मकै उच्च...